आश्वीन २८, २०७५
दशैं शुरु भयो । राजनीतिलाई पनि दशैं लाग्यो । पार्टीका कार्यकर्ताहरु दशैं खर्चका लागि नेताहरुको घर घर पुग्न थाले । आपसी विभाजनले नेताहरुलाई सजिलो भएको छ । कार्यकर्ता आ–आफना नेताको घरमा पुग्दैछन । राजनीतिले चाड–पर्वलाई व्यंग्यात्मक तीर हिर्काएको छ । दशै र तिहार वीचको समय शरद् ऋृतुका दिन सूर्योदयसंगै चिरविराउने रैथाने भ“गेरा जस्तै भुर्रर उडेर सकिन्छन । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले बकैना र लप्सीका बोट, ढुंग्री पूmलका झाडी देखिदैनन । दशैं अव पहिलेको जस्तो रहेन । पूmलपातीका दिन टु“डिखेलमा हुने वढाईं जस्तै दशैं औपचारिक भएको छ । शहरका प्रख्यात दुर्गा मन्दिरहरुमा नवरात्रिको पहिरन रातो भोटो र रातो धोतीमा चण्डी पाठगर्ने पण्डितहरुको संख्या पातलिन थालेको छ । जो देखिन्छन ती अघिल्लो सा“झ पिएको गुह्येश्वरीको जलले लट्ठिएको अनुमानगर्न सकिन्छ । देवी शक्तिकाप्रतीक मानिने मदिरा र मांसजस्ता प्रमुख तत्वबाट पण्डित मात्रै किन वन्चित रहने ?चार दशक पहिलेको तीन शहर नेपाल अर्थात काठमाडौं शहर चाडवाड र जात्राको हिसावले अतुलनीय थियो । भदौ महिनाको मध्यतिर, विहान चारैवजे वातावरणमा बाजाको मंगल धून घन्किन थालेपछि दशैं आएको आभाश हुन्थ्यो । पितृ पक्षको पन्ध्र विहान शहर सूनसान हुन्थ्यो । त्यसपछि फेरी चर्को कोलाहल । घटस्थापनाका दिनदेखि नवरात्री स्नान र देवी दर्शनका लागि विहान तीन वजेदेखि नै नवरात्री मेलाका सहभागीहरुको लर्को लाग्दथ्यो वागमती र विष्णुमतीको किनारामा । मेला तन्नेरी उमेरका केटा–केटीहरुका लागि हलुका रोमान्सको अनुभवगर्ने मौका पनि हुन्थ्यो । विष्णुमती नुहाउनेहरु शोभा भगवतीको दर्शनपछि हा“स्दै नाच्दै गुह्येश्वरी आइ पुग्दथे भने वागमती नुहाउनेहरु गुह्येश्वरीको दर्शनपछि हतार हतार शोेभा भगवतीतिर हानिन्थे । वीचमा पर्ने मैतीदेवीदेखि भद्रकालीसम्म कुनैपनि देवीको दर्शन छुटदैनथ्यो । अहिले सामाजिक अवस्थामा उथल–पुथल नै आइ सकेको छ । दशैंको बहानामा घरघरमा विभेदको पर्खाल खडा गरिदैछ । दशैं हाम्रो होइन उसको मात्रै हो भन्नेहरुले दशैं जसले मान्छ त्यसैको हो भन्ने सदाशय राख्न सकेका छैनन । तै पनि, योे खाल्डोमा चाडवाड र जात्रा भनेपछि हुरुक्कहुने रसीकहरुको संख्या घटेको छैन । दशैको नवरात्री मेलामा भागलिनेहरु माइक्रो वसमा रिजर्भहुन थालेका छन । तिहारको ।।।न्हू“ दया भिन्तुना’मासहभागिता वढन थालेको छ । दशैं हाइ प्रोफाइल भएको छ । कहा“ उतिवेलाको असन इन्द्रचोकको किनमेल । कहा“ अहिले विभिन्न अफरहरु सहितको शपिंग । दशैंका लागि किनिएको कम्ब्याट ड्रेस लगाएर रमाइरहेका केटाकेटी देख्दा एक लर्को सम्झना उर्लेर आयो । नया“ नानाको चाड थियो दशै उतिखेर । नैनसूतको सेतो सुरुवाल र छिरविरे रंगको कमीज लगाउन पाएपछि भूईंमा पाइला राख्नै मन नलाग्ने केटाहरु । घा“घर र वडो मुजा पारेर सिलाएको पन्जावी सुरुवालमा रमाउने केटीहरु । चिची – छर–छिमेकका घरमा खसी काटिदैनथ्यो । घरमा केटाकेटी मात्रै मांसाहारी । हाम्रो सानो वजारमा मासु पसल एउटै थियो । त्यो पसलेमाथि आमाको विश्वास थिएन । गाउ“मा छिमेकीहरु मिलेर खसी ल्याउथे, ढाल्थे र दामासाही भाग लगाएर वेच्थे । एक एक भाग हरेक घरमा भित्रिन्थ्यो । घर नै पो कति थियो र । एक दर्जनभन्दा कम ।घरको टिका सकिएपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म आफन्त र मान्यजनका घरमा टिका लगाउन हिंडनेको ता“ती लाग्दथ्यो । सा“झ घर फर्केर दक्षिणामा पाइएको सिक्काहरु गन्थे केटाकेटीहरु । दशैंसकिए पछि सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका स्वायत्तशासी संस्थान खुल्दछन । यो बर्ष सरकारले दशैं घटस्थापनाको बिदा काटि दियो । जनताले नराम्रो माने ।कृषि प्रधान देश नेपालमा शरद ऋृतुको आगमनसंगै किसानहरु खेती–पातीको व्यवस्थापनको काम सक्दछन । पितृ पक्षमा आफना वावु–वराजेका नाममा पार्वण श्राध्द गर्दछन । त्यसपछि काठमाडौ उपत्यकाबाट शुरुहुन्छ – चाडवाड, जात्रा र पर्वको सिलसिला । तर, एकमहिनाको अन्तरालमा आउने दशैं–तिहारभन्दा ठूलो हैसियत अरु कुनै चाडपर्वले पनि पाएका छैनन । धेरैको मतमा दशैंभन्दा रमाइलो चाड हो तिहार । दशैं अलि गह्ु्रंगो हुन्छ । खर्चिलो पनि । जुवा खेल्नेका लागि त तिहार पनि वोझिलो हुन्छ । तिहारलाई जुवाको मार्रासंग जोडनेहरु विर्सिन्छन– तिहार त उज्यालोको अभ्यर्थना हो । तिहार अर्थात पूmलको उत्सव । फलपूmल खाने आदत नपरेको देशमा फलपूmलको उत्सव । पूmल र फलपूmलको प्रसंगमा कुनैवेला पूरै उपत्यका रंगीचंगी पूmलहरुले ढाकिएको देखिन्थ्यो । रंगी–विरंगी पुतली पूmलहरु, सयपत्री, मखमली र लाहुरे । हरेक घरका गमलामा गुनकेशरी पूmल्नै पथ्र्यो । नत्र कसरी देख्ने थिए कवि भानुभक्तले गुनकेशरी पूmलले शिर सिंगारेर एकसुरमा हिंडेका चपला–अवलाहरु ? उपत्यकाको मौलिक प्रकृतिको देन । त्यो पूmल आ“खामा चढनेहरु सवै काल–कवलित भै सकेका छैनन । उतिबेला तिहारको पहिलो दिन केटाकेटीहरु कागको वथान देखेर रमाउ“थे । कागको वथान केही वेर रछानमा भातका सिता टिपेर वेपत्ता हुन्थे । घरमा भात पाकेपछि स–साना वोहोतामा दाल–भात, दूवो र तेल, धूप–वत्ती, अवीर–केसरी कागको नाममा छुट्याइन्थ्यो । ती वोहोताहरुलाई नांगलामा राखेर केटाकेटीहरु आंगनमा ओर्लिन्थे । कागलाई वोलाउन थाल्दथे–काग,काग,काग । निकै वेरको प्रयत्नपछि काग आउ“थ्यो । नांगलावाट चुच्चोले केही टिपेर भाग्दथ्यो । कुकुर तिहारको दिन त झन रमाइलो हुन्थ्यो । कुकुरहरु धेरै थिएनन । सिक्रिमा वा“धेर कुकुर पाल्नेहरु त हाम्रो गाउ“मा त के, पूरै शहरमा नगण्य थिए । एउटै कुकुरले चार–पा“च घरको रखवाली गर्दथ्यो । सामान्य समयमा समेत भात–भान्साको समयमा उसलाई पूmर्सद नै हु“दैनथ्यो । कसैको भान्सामा मासु पाकेको रहेछ भने घण्टौं त्यही घरमा अलमलिन्थ्यो । कात्तिक महिना कुकुरको मेटिंग सिजन मानिन्छ । कुकुर त्यसमा अलमलियो भने त दिन डुव्थ्यो । तै पनि, हाम्रो गाउ“को रैथाने कुकुर ज्ञानी र भद्र नै थियो । उ गाउ“का सवै घरको पूजा ग्रहणगर्न भ्याउ“थ्यो ।काग, कुकुर, गाइ, गोरु – अहिले पनि तिहार सवैको मनाइन्छ । काग कहिलेकहीं कतै कतै देखिन्छन वथानमा । कुकुरको समस्या छैन । उपत्यकामा अरु जीव–जिवात नदेखिए पनि कुकुरको संख्या वढदो छ । घरघरको ढोकामा केनेल क्लवको पाटी झुण्डिएको देखिन्छ, “कुकुरदेखि सावधान ।” गाई–गोरुको समस्या नै भएन । तिहारको दिन दाम्लोमा वा“धिएका गाइ–गोरु डोहोर्याएर ढोका ढोकामा होम डेलिभरी दिने समूहको संख्या वढदो छ ।तिहारको सवभन्दा रमाइलो पक्ष हो मिठाइ । तिनताका, शहरमा थोरै मात्र थिए हलुवाइका पसल । अहिलेको जस्तो वहुराष्ट्रिय कर्पोरेट मिठाइ कम्पनीको विस्तार भएको थिएन काठमाडौंमा । उपत्यका मौलिक मिठाइ थिए, शुध्द ध्यूमा तयार पारिएका जुल्फी र जेरी, वम्वइसन र वर्फी, लालमोहन र रसभरी, लाखामरी र ऐंठे, पेडा र लड्डु, खाजा र निम्की– सम्झनामा आएका मिठाइ यत्ति नै हुन । तिहारका लागि प्राय सवै घरमा भित्रिने मिठाइ हुन्थे पेडा, लड्डु र वर्फी । सेल, अर्सा–अनर्सा, मालपुवा, वावर, पूवा र खुवा...घरैमा वन्थ्यो । कसले पकाएको सेल राम्रो र मीठो ? एकप्रकारको प्रतिस्पध्र्दा हुन्थ्यो छिमेकका प्रत्येक घरका वीच । स्नेह र सदभावका साथ तयार पारिएका यी मिष्ठान्न र पकवानहरु स्वादिलो र स्वस्थ्यकर हुन्थ्यो । जे भएपनि र जस्तो भएपनि, दशैं छ र तिहार छ । उपत्यकाको पूरै नक्सा वदलिएको अहिलेको अवस्थामा दशैं र तिहारको हुलिया वदलिनु अनौठो होइन । जनताको संस्कृतिलाई धर्मसंग जोडनु चाहीं अनौठो हो । देश गणतन्त्र र धर्म–निरपेक्ष हुने वित्तिकै संस्कृति वेमाख हु“दैनन । दशैंमा किन जमरा लगाइस वा तिहारमा किन म्हःपूजा गरिस भनेर प्रश्न सोध्नु कठोर हठवाद हो । यस्तो हठवाद कतै नदेखियोस । दशैं–तिहार सबैका लागि सुखमय होस ।